အိပ်မက် – ၁၃၉ (Dream 139 by Naguib Mahfouz) | PoemsCorner
အရမ်းကို နာမည်ကြီးနေတဲ့ ပြပွဲတခု….
နောက်တလှမ်းရှေ့ဆက်တိုးလိုက်တယ်ဆိုရင်ပဲ ထိုအမျိုးသမီးသည် မရှိတော့။ အမျိုးသမီးအစား မြင်လိုက်ရသည်က ကျောက်တုံးက စလို့ ခုခေတ်နောက်ဆုံးပေါ်လက်နက်တွေထိအောင် လက်နက်ပေါင်းစုံကို ဆွဲကိုင်ထားတဲ့ ဒေါသမောဟတွေ ဖုံးလွှမ်းနေတဲ့ စစ်ပွဲ တခုဖြစ်နေပြီ…….
In: စကားပြေ Posted By: Lumaw Date: Dec 18, 2010
ငွေ့ရည်တွေနဲ့ လေးကန်နေတဲ့ အိပ်မက်
Leave comment 1 Comment & 397 views
By: နရီထက် at Dec 19, 2010